सुनसरीमा १३ जनालाई बिक्री गरिएको एउटै जग्गा अन्तिममा पुरानै धनीका नाममा रजिस्ट्रेसन दर्ता !::Pathivara News
सुनसरीमा १३ जनालाई बिक्री गरिएको एउटै जग्गा अन्तिममा पुरानै धनीका नाममा रजिस्ट्रेसन दर्ता !
विभिन्न समयमा १३ व्यक्तिको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको जग्गा फेरि पुरानै धनीमा नामसारी भएको खुलासा भएको छ । सुनसरी रामधुनी–५ झुम्कामा रहेको १२ कट्ठा चार धुर जग्गा १३ जनालाई बेचेपछि फेरि मधेसाका सानुराजा कार्कीकै नाममा दर्ता भएको पाइएको हो ।
सुरुमा सानुराजा कार्की र सुवास साहको नाममा रहेको सो जग्गा नेपाल बैँक लिमिटेडले लिलाम गरेको थियो । लिलाम सकार गरेका व्यक्तिका नाममा जग्गा मालपोल कार्यालयमा दाखिला भएको थियो । त्यसपछि कित्ताकाट गरी १२ जनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भयो ।
अहिले पुनः सुरुकै संयुक्त जग्गाधनीमध्येका सानुराजा कार्कीको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन भएको पाइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरण र मालपोत कार्यालय इनरुवाको लापरबाहीले सो जग्गा पुरानै धनीको नाममा दर्ता भएको हो । डेगराज फुँयाल र खगेन्द्र काफ्ले आफूले किनेको जग्गा बेच्न जाँदा पुरानै धनीको नाममा दर्ता भएको खुलेको हो ।
बैंकको पटक–पटकको लिलामी प्रक्रियामा जग्गा कसैले नसकारेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट २१ लाखको लिलामी सूचना निकालिएको थियो । तोकिएको समयमा अजय गुप्ताले मात्रै निवेदन दिएका थिए । पछि म्याद गुजारेर रकम बुझाउने समय थप्न साबिक जग्गाधनी सानुराजा कार्कीले समेत निवेदन दिए ।
जग्गा किन्नेमध्येका एक डेडराज फुँयालका अनुसार १९ वैशाख ०७० मा दुवै निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा ऋण असुली न्यायाधिकरण बेन्चले ‘ऋण असुली अधिकृतले गरेअनुसार हुने’ आदेश दिए । आदेशअनुसार २० वैशाख ०७० मा अजयकुमार गुप्ताले लिलाम सकारे । गुप्ताले सो जग्गा श्यामकुमारी साहू र अपेक्षा भट्टका नाममा बिक्री गरे ।
साहू र भट्टबाट रामधुनी नगरपालिकाका खगेन्द्र काफ्ले र डेगराज फुँयालले किने । उनीहरूले ५१ लाखमा सो जग्गा किनेको देखिन्छ । उनीहरूले सो जग्गा प्लटिङ गरी आठजनालाई बेचिसकेका थिए । बाँकी जग्गा बेच्न जाँदा पहिलेकै धनी सानुराजा कार्कीको नाममा दर्ता भइसकेको भन्दै फर्काइएको थियो ।
मालपोत कार्यालयको लापरबाही
मालपोत कार्यालयले न्यायाधिकरणको पहिलो फैसलाअनुसार जसले जग्गा लिलाम सका¥यो उसैको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदियो । तर, पछि फेरि पुरानै जग्गाधनीको नाममा रजिस्ट्रेसन दर्ता गर्न आदेशसहितको पत्र आएपछि विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री भइसकेको जग्गा फर्काइयो । जग्गा किन्ने खगेन्द्र काफ्लेलगायत केहीसँग धनीपुर्जा साथमा भए पनि जग्गाको स्वमित्व उनीहरूसँग छैन ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सूर्य थापाले भने आश्चर्य प्रकट गरे । उनले भने, ‘बैंककै नाममा भएको भए पुराना ऋणीको नाममा न्यायाधिकरणले फैसला गर्न सक्छ, तर अरू विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा पुरानै धनीको नामा फिर्ता आउनै सक्दैन ।’ यस विषयमा ऋण असुली न्यायाधिकरण नै जिम्मेवार हुने उनले बताए ।
न्यायाधिकरणको दोहोरो फैसलाले लफडा
ऋण असुली न्यायाधिकरण काठमाडौंको दुई फरक आदेशले जग्गाको स्वामित्व पुरानै धनीमा फर्किएको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरण काठमाडौंका अघिल्ला अध्यक्ष गोकुल बुर्लाकोटीको आदेशमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जग्गा लिलाम भएको थियो । तर, त्यसपछिका अध्यक्ष शेरजंग कार्कीले सो आदेश उल्ट्याएर पहिलाकै जग्गाधनी सानुराजा कार्कीका नाममा पुनः दाखिला हुने फैसला गरेका थिए ।
– नया पत्रिकबाट